2 UCanzibe 2017
Isinyathelo esilandelayo kwiCandelo lokuSebenza
Ngale ndlela, unesimo sakho seSahluko seSikweni esilungiselelwe kwaye sikrokra njengentaka encinane. Abalawuli bakancoma ngokutshintsho olukhulu kumgudu olungelelanisiweyo, kwaye ukongeza ukukwazi ukufumana ulwazi oluyimfuneko kunoma iyiphi indawo. Ufezekisile okunye abantu abambalwa abakwaziyo, bhala!
Ngokukhawuleza, imibuzo eqhelekileyo iya kuthatha emva ...
Ingaba ikhonkco ingaba yinto ebonakalayo kwintlangano yethu?
Ngaba sinokukufaka oku kunye nezinye iisofthiwe?
Ingaba inkqubo ingahlanjululwa ngenjongo engayifuni kangako ukulungiselela?
Isebenza ngokumangalisayo njengoko kubonakala ngathi, kodwa kuya kuba ngumlinganiselo omkhulu xa ...
Iimpendulo kule mibuzo zihlala zifezekile ngokudlulileyo kwinxalenye yesintu yomlawuli kwaye zifuna ukuba ugqoke umphambili wakho wezakhiwo, nakweyiphi na imeko ixesha elithile. Yiba njengoko kunjalo, bamba ... awuyena umyili.
Ukunyuka okuphuculayo ukuphucula yinkqubo yezinto ezininzi ezinokubonakala ngathi zinamandla ngaphezu kokuqala, nangona kunjalo kulula ukufikelela kunye nokulungiswa okufanelekileyo kunye nokulungelelanisa ngokuchanekileyo. Ngokuwina yakho UMicrosoft MCSD: Isiqinisekiso seNkqubo yoBuyili, unokuzibeka ukuze usebenze ngokukhawuleza ukuxakeka kobunzima bokuphuculwa kweSahluko. Njengomvuzo, ukongeza ukwakha ukhuseleko olubalulekileyo lwezoshishino. Inyaniso ethembekileyo yokuba SharePoint iinjineli ziqhelekanga zifumane kule mzuzu!
Kungakhathaliseki ukuba usebenza kwinkqubo yedwa okanye SharePoint kwifama, ngaphandle kokungabaza unokuba neeyure ezingapheliyo ukubeka izixhobo ekuyila imeko yakho yomncedisi ukudibanisa iimfuno zombutho wakho. Olu kufunda lwesakhiwo seS SP esifanayo sisinika isikhundla esiphezulu xa sikhe ithuba elihle lokufuduka. Wena njengamanje unokuqonda okuphezulu ukuya ngaphantsi kweendlela SharePoint imisebenzi kunye nenjongo yaloo ntlangano.
Uninzi lwexesha, kukho amandla anokubandakanywa kunye ne SharePoint engadingi nayiphi na ikhowudi. Kuya kuba yinkangala ekwakheni ilungiselelo lamasiko xa amandla okwangoku ekhoyo ngaphakathi kwi-SharePoint ngokwayo. Kule miqolo, ingcamango ehlakaniphile ukufumana isicwangciso esiqilileyo kwisakhiwo sokuphucula esinomdla kwi-SharePoint, umzekelo, ukuqokelela indawo, izicelo, ukungena, kunye neirekhodi. Kufuneka ukhethe ngokwakho isixhobo sokuguqula i-SharePoint, iMicrosoft Office SharePoint Designer. Ikhuthaza ukusetyenziswa ngokwezifiso ezahlukeneyo kubandakanya ukuba akukho mfuneko yokwenza.
Unokuphuhlisa ingqiqo yakho ngeSahlulo esincinci seSabelo-e-classic instruction. Ezi zifundo zibeka indlela ekuqhubela phambili kwi-SharePoint phambili ngokuqinisekisa ukuba unesilinganiselo sokuqonda esibalulekileyo ukuqamba ikhowudi ekhulayo kunye nefanelekileyo kwiSabelo soPhuhliso:
Xa ulungele ukuqhubela phambili ukusuka kwi-SharePoint Padawan ukuya kwiJedi Master, ukuqhubela phambili kwe-Microsoft SharePoint Server 2013 70-332 kuya kukufumana khona! Yilungiselelo eliqhelekileyo lokuqhubela phambili nokuzisa izicwangciso zenkcubeko, kubandakanywa ulawulo lwezentengiselwano zorhwebo ukuxhuma i-SharePoint kunye nezinye iinkqubo zedatha.
Njengomvuzo, zombini zezi zifundo zikumisela ukulungiselela iimviwo zeMicrosoft kwixesha elihle lokuba ufuna ukuzongeza kwi-MCSE yakho: Ukuqokelela umveliso.
Umgca olandelayo kwi-MCSD: I-App Builder isitifiketi kukufumana MCSA: Izicelo zewebhu okanye i-MCSA: I-Universal Windows Platform cert. Unokukhetha okanye, njengokuba zombini zilungele ukuphuculwa kwe-SharePoint. Enyanisweni, kunokusengqiqweni ukulandela bobabini.
Kukho iimviwo ezimbini ezifunekayo ukuze zifumane Sekiso seMCSA, kwaye uya kufuna uninzi oluninzi lokulungiselela kunye nokwenza izandla ukufumana ukuqonda okufanelekileyo ASP.NET or C # inkqubo. I-Visual Studio ikuvumela ukulandela imizekelo yezicelo ze-SharePoint, kwaye iMicrosoft inikeza iindlela ezihamba phambili ezibandakanya iindidi ezahlukahlukeneyo. Ngezixhobo zokusebenza ezifundisayo, umlawuli ophumelelayo onjengawe unokuhlaziya ukuqhubela phambili kwakho kwi-blink yelihlo.
Emva kokuba ezi zixhobo zigqityiwe, ungagqiba yakho App Builder i-cert ngokudlulisa uvavanyo lwe-Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions. Olu vavanyo lugxila ekusebenziseni iisombululo zeprogram kunye nekhowudi ze-code ukuze zifake ngokugqithiseleyo ukusekwa kweSahlulo seSahluko kwiimfuno zombutho wakho.
Isitalato ukuya I-App Builder isatifikethi ingaba ngamava afundisa ngokukodwa. Iingxaki ezabonakala zingenakufikeleleka ngoku zinokulungiswa kunye nemigca emibini yekhowudi. Unokugqoka i-ingenisi yakho entsha ngenjabulo njengoko inzuzo yakho yenhlangano ikhupha!